Kwethulwa Kwezinhlelo Nokufunda Ngekhamera Yomzimba Ozelwe | Izixazululo ze-OMG
Ukuvela kwakamuva kwamakhamera agqokwa ngomzimba sekuvele kunomthelela emaphoyiseni, futhi lo mphumela uzokwenyuka kuphela njengoba izinhlangano eziningi sezamukela lobu buchwepheshe. Isinqumo sokusebenzisa amakhamera agqokwa ngomzimba akufanele singene kalula. Lapho i-ejensi ihamba ngomgwaqo wokuqasha amakhamera agqokwa ngomzimba futhi lapho umphakathi ufika uzolindela ukutholakala kwamarekhodi wevidiyo. Kuzoba nzima ukuba nemicabango yesibili noma ukukala emuva uhlelo lwekhamera egqoke umzimba. UMnyango wamaphoyisa usebenzisa amakhamera agqoke izidumbu enza isitatimende esithi ukholelwa ukuthi isenzo samaphoyisa awo wudaba oluqoshwa emphakathini. Ngokubhekana nezinselelo nezindleko zokuthenga nokusebenzisa uhlelo lwamakhamera agqokwa ngomzimba, ukuthuthukisa izinqubomgomo, nokuqeqesha izikhulu zalo ukuthi zingawusebenzisa kanjani amakhamera, umnyango udala ithemba lokuthi amalungu omphakathi nabezindaba bazofuna ukubukeza isenzo sezikhulu. Futhi ngaphandle kokukhawulelwa okuthile okushicilelwa yilolu shicilelo, ividiyo ezothwalwa nge-camera egqoke umzimba kumele inikezwe umphakathi uma uceliwe hhayi nje ngoba amavidiyo angamarekhodi omphakathi kodwa futhi ngoba ukwenza lokho kuvumela umnyango wamaphoyisa ukuthi ubonise sobala nangokuvuleleka kokuma kwawo. ukusebenzisana namalungu omphakathi.
Ngonyaka odlule, i-Police Executive Research Forum (i-PERF), ngokuxhaswa yiHhovisi loMnyango Wezobulungiswa e-US le-Community Oriented Policing (i-COPS Office), bacwaninga ngokusetshenziswa kwamakhamera agqoke umzimba ezinhlanganweni zamaphoyisa. I-PERF ixoxisane nabaphathi bamaphoyisa abangaphezu kwama-40 abanolwazi ngamakhamera agqoke umzimba, babuyekeza izinqubomgomo zamakhamera ezigqoke umzimba ezingaphezu kwezingama-20 ezithunyelwe ama-ejensi amaphoyisa, futhi babamba ingqungquthela yosuku olulodwa eWashington, DC, lapho izinduna zamaphoyisa ezingaphezu kuka-200, abaphathi , izifundiswa, izikhulu zezobulungiswa zikahulumeni, nabanye ochwepheshe baxoxa ngokuhlangenwe nakho kwabo ngamakhamera agqoke umzimba.
Izinhlangano zomthetho zisebenzisa amakhamera agqokwa ngomzimba ngezindlela ezahlukahlukene: ukwenza ngcono ukuqoqwa kobufakazi, ukuqinisa ukusebenza kwamaphoyisa kanye nokuziphendulela, ukuthuthukisa ukubonakala kwe-ejensi, ukubhala imibhalo phakathi kwamaphoyisa nomphakathi, kanye nokuphenya nokuxazulula izikhalazo kanye nezehlakalo ezibandakanyekile kumaphoyisa.
Isikhungo ngasinye somthetho sihlukile, futhi okusebenzayo kumnyango owodwa kungenzeka kungatholakali komunye. Ama-ejensi angakuthola kudingekile ukuvumelanisa lezi zincomo ukuze zilingane nezidingo zazo, isabelomali kanye nokulinganiselwa kwabasebenzi, izidingo zomthetho wombuso, kanye nendlela yefilosofi yezindaba zobumfihlo nezamaphoyisa.
Lapho kuthuthukiswa izinqubomgomo zamakhamera agqokwa ngomzimba, i-PERF incoma ukuthi izinhlangano zamaphoyisa zixhumane nabaphathi bangaphambili, izinyunyana zasendaweni, abeluleki bezomthetho bomnyango, abashushisi, amaqembu omphakathi, abanye ababambiqhaza bendawo, kanye nomphakathi jikelele. Ukufakwa okuhlanganisiwe kula maqembu kuzothuthukisa ukubonwa njengezinqubomgomo zamakhamera agqokwa ngumnyango futhi kuzokwenza inqubo yokuqalisa ihambe kahle kakhulu kwizinhlangano ezisebenzela la makhamera
Izinqubomgomo kufanele zisho ngokusobala ukuthi yibaphi abasebenzi ababelwe noma abavunyelwe ukugqoka amakhamera agqokwa ngomzimba futhi ngaphansi kwaziphi izimo.
Uma i-ejensi iphathisa amakhamera izikhulu ngokuzithandela, izinqubomgomo kufanele zichaze noma yiziphi izimo ezithile lapho umsebenzi kungadingeka ukuthi agqoke.
Ama-ejensi akufanele avumele abasebenzi ukuthi basebenzise amakhamera agqokwa ngabomuntu ngasese ngenkathi besemsebenzini.
Izinqubomgomo kufanele zichaze indawo okuyogqokwa kuyo amakhamera.
Iziphathimandla ezisebenza zisebenzise ikhamera egqoke umzimba ngenkathi zisemsebenzini kufanele zinikezwe ukuthi ziqaphele ubukhona bokuqoshwa kombiko wesigameko esisemthethweni.
Iziphathimandla ezigqoka amakhamera agqokwa ngomzimba kufanele zicelwe ukucacisa ngekhamera noma ngokubhala izizathu zazo uma zehluleka ukuqopha into edingwa yinqubomgomo yomnyango ukuthi iqoshwe.
Izifundo ezifundwe ngokucatshangelwa ubumfihlo
Amakhamera agqokwa ngomzimba anomthelela omkhulu emalungelweni obumfihlo bomphakathi, ikakhulukazi uma kukhulunywa ngokuqoshwa kwengxoxo nezisulu, ubunqunu, nezinye izihloko ezibucayi nalapho kuqoshwa ngaphakathi kwamakhaya abantu. Ama-ejensi kufanele afake lokhu kucatshangwa kobumfihlo ezinqumweni zokuthi aqophe nini, kuphi futhi nini ukugcina idatha, nokuthi angaphendula kanjani izicelo zomphakathi zokusakazwa kwevidiyo.
Lapho abaphathi kufanele bacelwe ukusebenzisa amakhamera abo, indlela ejwayelekile kakhulu idinga ukuthi izikhulu zirekhode zonke izingcingo zenkonzo kanye nokuhlangana okuhlobene nomthetho futhi zenze ikhamera kuphela ekugcineni komcimbi noma ngemvume yokuqondisa.
Kubalulekile ukucacisa ngokusobala ukuthi yini okubandakanya ukuhlangana okuhlobene nomthetho noma umsebenzi enqubweni yenqubomgomo yekhamera egqoke umzimba yomzimba. Kuyasiza futhi ukuhlinzeka ngohlu lwemisebenzi ethile efakiwe, uphawula ukuthi uhlu alufakwa kukho konke. Ama-ejensi amaningi anikeza izincomo ezijwayelekile kwiziphathimandla ukuthi lapho zingabaza, kufanele ziqophe.
Ukuvikela ukuphepha kwezikhulu nokwazisa ukuthi ukuqoshwa kungenzeka kungenzeki kuzo zonke izimo, kuyasiza ukusho kuzinqubomgomo ezithi ukuqoshwa ngeke kudingeke uma kungaphephile, kungenzeki, noma kungasebenzi.
Izinkinga ezikhethekile zobumfihlo zingavela lapho kuxoxwa nezisulu zobugebengu, ikakhulukazi ezimweni ezibandakanya ukudlwengulwa, ukuhlukunyezwa, noma ezinye izindaba ezibucayi. Amanye ama-ejensi athanda ukunika izikhulu ukuqonda ngokubhekisisa ukuqopha kulezi zimo. Ezimweni ezinjalo, izikhulu kufanele zinake inani lobufakazi bokuqoshwa kanye nokuzimisela kwesisulu ukukhuluma ngekhamera. Ezinye izinhlangano ziqhubekela phambili futhi zidinga ukuthi izikhulu zithole imvume yalowo ohlukunyezwa ngaphambi kokuqopha inhlolokhono.
Ukugqugquzela ukuziphendulela okusemthethweni, izinqubomgomo eziningi zidinga ukuthi abaphathi babhale, bakwekhamera noma ngokubhala, izizathu ezenze ukuthi lowo msebenzi akhiphe ikhamera ezimeni ezidingeka ukuthi ziqoshwe.
Lapho uthatha izinqumo mayelana nokuthi kufanele kugcinwe kuphi ukugqokwa kwekhamera egqoke umzimba, isikhathi esingakanani ukuyigcina, nokuthi kufanele kudalulwe kanjani emphakathini, kungakuhle ukuthi izinhlaka zithintane nabeluleki bezomthetho nabashushisi bomnyango.
Ukusiza ukuvikela amalungelo wobumfihlo, kungcono kakhulu ukukhetha ukusetha izikhathi ezimfushane zokugcinwa kwemininingwane engeyona eyobufakazi. Isikhathi esijwayelekile kakhulu sokugcinwa kwale vidiyo siphakathi kwezinsuku ze-60 ne-90.
Izifundo ezifundwe ngomthelela ebudlelwaneni bomphakathi
Ama-ejensi abone ukuthi kuwusizo ukuxhumana nomphakathi, abenzi bezinqubomgomo, nabanye ababambe iqhaza
mayelana nokuthi amakhamera azosetshenziselwa ini nokuthi amakhamera azowathinta kanjani.
Imidiya yezenhlalo iyindlela ephumelelayo yokwenza lula ukubandakanyeka komphakathi.
Cela izikhulu ukuthi ziqophe izingcingo zensizakalo nemisebenzi ehlobene nomthetho kunokuhlangana njalo nomphakathi zingaqinisekisa ukuthi izikhulu aziphoqelekile ukuqopha izinhlobo zezingxoxo ezingajwayelekile ezibalulekile ekwakheni ubudlelwano obungekho emthethweni emphakathini.
Ukurekhoda izehlakalo endaweni ebukhoma yobugebengu kungasiza izikhulu ukuthi zibambe izitatimende ezizwelayo kanye nemibono engaba wusizo kuphenyo noma umshushisi wakamuva.
Ukubandakanya umphakathi ngaphambi kokusebenzisa uhlelo lwekhamera kungasiza ukusekela okuphephile kohlelo futhi kwandise ubuciko obaziwa bohlelo emphakathini.
Cela izikhulu ukuthi zibhale, zisebenzise ikhamera noma zibhale, izizathu ezenze ukuthi zikhiphe ikhamera ezimeni lapho kudingeka ukuthi ziqoshwe zikhuthaza ukuziphendulela kwephoyisa.
Izifundo ozifundile maqondana nokukhuluma nabaphathi bezinkinga
Njenganoma yikuphi okunye ukuthunyelwa kobuchwepheshe obusha, uhlelo, noma isu, indlela enhle kakhulu ifaka phakathi imizamo yabaholi be-ejensi yokubandakanya izikhulu ngesihloko, ichaze izinhloso kanye nezinzuzo zalolu hlelo, futhi ibhekane nanoma yiziphi izikhulu ezikhathazayo ezingaba nazo.
Ukubekwa ngamafuphi, izingcingo, kanye nemihlangano nabamele izinyunyana kuyizindlela ezisebenzayo zokuxhumana imininingwane ngohlelo lwekhamera egqoke umzimba.
Ukwakha ithimba lokuqalisa elifaka abamele abaqhamuka kuwo wonke umnyango kungasiza ukuqinisa ubuqiniso bohlelo kanye nokwenza lula ukusetshenziswa.
Amakhamera agqokwa ngomzimba angasebenza njengethuluzi lokufundisa lapho abaphathi bebukeza i-footage nezikhulu futhi banikeze impendulo eyakhayo.
Ubude besikhathi sedatha erekhodiwe buzogcinwa yi-ejensi ezimweni ezahlukahlukene.
Inqubo nezinqubomgomo zokufinyelela nokubuyekezwa kwedatha erekhodiwe, kufaka phakathi abantu abagunyazwe ukufinyelela idatha nezimo lapho idatha erekhodiwe ingabuyekezwa.
Izinqubomgomo zokukhulula idatha erekhodiwe emphakathini, kufaka phakathi imigomo ephathelene nokuncishiswa kanye nokuphendula izicelo zokuvezwa komphakathi.
Ngamafuphi, izinqubomgomo kufanele zihambisane nayo yonke imithetho ekhona nemigomo, kufaka phakathi lokho kuqoqwa kobufakazi nokugcinwa, ukudalulwa komphakathi kwemininingwane nemvume. Izinqubomgomo kufanele zichazwe ngokwanele ukunikeza isiqondisi esicacile nesingaguquguquki kubaphathi kepha sivumele ithuba lokuguquguquka njengoba uhlelo luvela. Ama-ejensi kufanele enze izinqubomgomo zitholakale emphakathini, mhlawumbe ngokuthumela izinqubomgomo kuwebhusayithi ye-ejensi.
Lapho esetshenziswa kahle, amakhamera agqokwa ngomzimba angasiza ekuqiniseni umsebenzi wamaphoyisa. Lawa makhamera angasiza ukukhuthaza ukuziphendulela kwe-ejensi nokwenza izinto obala, futhi angaba ngamathuluzi awusizo wokukhulisa ubuchwepheshe bamaphoyisa, ukuthuthukisa ukuqeqeshwa kwamaphoyisa, ukulondolozwa kobufakazi, kanye nokubhala phansi izingxoxo nomphakathi. Kodwa-ke, zibuye ziphakamise izingqinamba njengodaba olusebenzayo kanye nasezingeni lezinqubomgomo, womabili la ma-ejensi okufanele ahlolwe ngokucophelela. Izinhlangano zamaphoyisa kumele zinqume ukuthi ukwamukelwa kwamakhamera agqokwa ngomzimba kuzosho ukuthini mayelana nobudlelwano bamaphoyisa nomphakathi, ubumfihlo, ukwethenjwa kanye nokuba semthethweni, kanye nobulungiswa bangaphakathi bezindlela zamaphoyisa.
Izinhlangano zamaphoyisa kufanele zisebenzise indlela yokusebenzisa uhlelo lwekhamera egqokwa ngomzimba. Lokhu kusho ukuhlola amakhamera ezinhlelweni zokushayela kanye nezikhulu ezibandakanyekayo kanye nomphakathi ngesikhathi sokuqalisa. Kusho futhi ukuqopha ngokucophelela izinqubomgomo zekhamera egqoke umzimba ezilinganisa ukuziphendulela, ukucaca, namalungelo wobumfihlo, kanye nokugcina ubudlelwano obalulekile obukhona phakathi kwezikhulu namalungu omphakathi.
Itholakala ku: https://www.policeforum.org/assets/docs/Free_Online_Documents/Technology/implementing%20a%20body-worn%20camera%20program.pdf
Kwethulwa Kwezinhlelo Nokufunda Ngekhamera Yomzimba-Worn igcine ukuguqulwa: Disemba 3rd, 2019 by admin
Ukubuka okuphelele kwe-4368 Ukubuka kwe-2 Namuhla